कसरी पुग्यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा... :: अमित ढकाल र शोभा शर्मा :: Setopati
कसरी पुग्यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा विष्णु पौडेलको हातमा?
अमित ढकाल र शोभा शर्मा काठमाडौं, चैत २८
कानुनबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट जग्गा खरिद गरेको बताउँदै उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'समाचारहरूमा उल्लेख भएजस्तो जग्गा हिनामिनामा म र मेरो परिवारका कुनै सदस्यको संलग्नता नरहेको बेहोरा सबैलाई जानकारी गराउँछु … यस प्रकारका समाचारबाट भ्रममा नपर्न सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’
को हुन् उमा ढकाल? सरकारी जग्गा कसरी ढकालका नाममा नामसारी भयो? त्यसपछि पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा कसरी पुग्यो? यो सारा प्रकरणमा विष्णु पौडेल कति संलग्न छन्?
यो २०१७ सालबाट सुरू हुन्छ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू' मार्फत् सत्ता हातमा लिए। कांग्रेसका नेताहरू जेल परे। कति निर्वासनमा गए।
तिनै नेतामध्ये एक थिए, सुवर्णशमसेर राणा। राणा परिवारका सुवर्णशमसेरसँग धेरै सम्पति थियो। राणाविरूद्ध आन्दोलन र कांग्रेस पार्टी सञ्चालनमा उनले धेरै पैसा सके। राजा महेन्द्रले ‘कू' गर्दा पनि उनी र उनको परिवारका नाममा काठमाडौंमा २९९ रोपनी जग्गा थियो।
सरकारी जग्गा भू-माफियाहरूले आफ्नो नाममा पुर्याउन कसरी सम्भव भयो?
२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो। आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हड्पेको भन्दै सुवर्णशमसेरका परिवार लगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागे। पञ्चायतले 'अन्यायपूर्ण' जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता देशैभरि थिए।
जग्गा हडप्न मुख्यत: दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'भू-माफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन्।
नापी कार्यालयका अनुसार उक्त जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास दक्षिण, राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय पश्चिम र सभामुख निवासबाट उत्तर-पश्चिममा पर्छ। (हेर्नुहोस् नक्सामा)
के हो विष्णु पौडेलसँग उनीहरूको सम्बन्ध?
त्यो सम्भावना टार्न पौडेलले 'लबिङ' गरे। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको कामलाई वैधता दिने गरी माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदले २०६७ वैशाख ३१ गते एउटा निर्णय गर्यो। त्यो बेला भूमिसुधार मन्त्री सिपी मैनालीको पार्टी नेकपा मालेका डम्बर श्रेष्ठ थिए।
भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले डिल्लीबजार मालपोतलाई सिधै जग्गाको श्रेस्ता दाखिल-खारेज तथा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार दियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त निर्णय 'नोटिस' मा लिँदै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने डिल्लीबजार मालपोतको एउटा निर्णय हालसालै सदर गरिदिएको छ।
समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ:
'तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानी-नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै खारेज गर्ने।'
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गत फागुन २८ गते नै व्यक्तिका नाममा गएका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- विष्णु पौडेल अपराधी होइन, जग्गा नक्कली पर्‍यो ठगीमा पर्नुभो: सरकार प्रवक्ता
यो सारा प्रकरणबारे सेतोपाटीले बिहीबार बिहान नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई टेलिफोनमा केही प्रश्न सोधेको थियो।
उक्त संवाद जस्ताको तस्तै:
प्रश्न: विष्णुजी, हिजो तपाईंले विज्ञप्ति निकालेर आफूले किनेको भनेको जग्गा कहाँको हो?
उत्तर: तपाईंलाई कित्ता नम्बर नै पठाइदिउँला नि!
कतिले त्यो जग्गा बालुवाटारको हो भन्छन् नि?
बालुवाटार त बालुवाटारकै हो।
त्यो जग्गा बालुवाटारमा सरकारी कम्पाउन्डभित्र छ भन्ने छ नि?
कम्पाउन्डभित्रको त हैन त्यो।
त्यो जग्गा पहिले सरकारले अधिग्रहण गरेको र पछि गैरकानुनी रुपले व्यक्तिका नाममा गएको जग्गामध्येको हो?
व्यक्तिहरूसँग किनेको हो हामीले। व्यक्तिहरूसँग पनि २०६१ सालमा किनेको हो।
जग्गाको त सरकारी रेकर्डमा पुस्तैनी खुलेको हुन्छ। त्यो सरकारले अधिग्रहण गरेको सुवर्णशमसेरको परिवारको नाममा रहेको र पछि व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको जग्गामध्येको हो?
हो, त्यही हो। त्यही हो।
कोसँग किन्नुभएको हो?
त्यो जग्गामा धेरै विवाद छ। धेरै गडबडी छ। त्यसमा धेरैले तपाईंको नाम पनि मुछेका छन्। के हो?
त्यो एकदमै गलत कुरा हो।
२०६७, वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले एउटा निर्णय गरेको रै’छ। त्यसले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई जग्गा दर्ता, खारेज गर्न पाउने अधिकार दिएको रै’छ। सरकारी छानबिन समितिले उक्त निर्णय स्थापित कानुनविपरीत गरिएको निर्णय भन्छ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा भएको यो निर्णय तपाईंले ‘फेसिलिटेट’ गरेको भन्ने छ नि?
हैन, हैन। यो बिल्कुलै गलत कुरा हो। मैले ०६७ सालमा किन फेसिलिटेट गर्नुपर्ने? जरुरत नै भएन नि!
माधव नेपालले नजिकका मान्छेसँग त्यो निर्णय कानुनविपरीत भएको आफूलाई थाहा नभएको, मुख्यसचिवले हेर्नुपर्ने हो, तर राजनीतिक रूपले विष्णु पौडेलले फेसिलिटेट गर्नुभएको र त्यसबापत् पार्टीले चन्दा पाएको बताउनुभएको रहेछ नि?
त्यो त निर्णयकर्ताहरूले जान्ने कुरा हो। मलाई थाहा भएन।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २९, २०७५, ००:१५:००
राजनीतिक तुलोमा एकातिर गोकुल बाँस्कोटा अर्कोतिर अरू सबैजस्तो भएको छ: प्रधानमन्त्री
सलाम नगरेको भन्दै जवानलाई कुट्न खोजे सिंहदरबारका इन्स्पेक्टरले
महरालाई संसद जाने बाटो खुल्यो, थुनामुक्त भएको जानकारी संसदलाई